मुम्बई । बलिवुडका महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन ७६ बर्षको उमेरमा पनि युवा अभिनेताहरु भन्दा व्यस्त रहेका छन् । अमिताभको बलिवुडमा जति अभिनयको चर्चा हुने गर्दछ त्यति नै उनको समाजको कामको पनि चर्चा हुने गर्दछ ।
यसै बीच अमिताभले बिहारका २१ सय किसानको बैंको ऋण तिरिदिएका छन् । यस बारेमा जानकारी दिदै अमिताभले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् ।
'किसानसँग गरिएको बाचा पुरा भएको छ । बिहारका २१ सय किसानको बाँकी रहेको बैंकको ऋण वान टाइम सेटलमेन्ट अनुसार उनीहरुको ऋणको भुक्तानी गरिएको छ । उनीहरुमध्ये केहिलाई बोलाएर अभिषेक र स्वेताको हातबाट उनीहरुलाई व्यक्तिगत तवरमा दिएको छु ।'
अमिताभले यस अघि उत्तर प्रदेशका एक हजार किसानको ऋण तिरिदिएका थिए ।
साथै अमिताभले अब शहिदका परिवारलाई केहि सहयोग गर्ने समेत जानकारी दिए ।
फिल्ममा भने हालै उनको बदला रिलिज भएको थियो भने फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो भने अब रणबीर कपुर, आलिया भट्टसँग फिल्म ब्रह्मश्त्र आउदै छ ।
रणवीर कपुर र राजा मौलीसँग भिड्दै कार्तिक आर्यन !
मुम्बई । बलिवुडमा पछिल्लो समयका सफल अभिनेता कार्तिक आर्यन एक पछि अर्को ठुलो बजेको फिल्म साइन गरिरहेका छन् । सन् २०११ मा प्यारका पंचानामाबाट बलिवुडमा डेभ्यु गरेका कार्तिकले पछिल्लो समय
अक्षयको मिशन मंगल सय करोड तिर, तीन दिनमा यस्तो छ कलेक्सन
मुम्बई । बलिवुडमा सार्वजनिक बिदाको दिन अगष्ट १५ मा रिलिज भएको अक्षयकुमार को फिल्म मिशन मंगलले पहिलो तीन दिनमा रेकर्ड कलेक्सन गरेको छ । विहिबार रिलिज भएको फिल्मले तीन दिनमा ७०
साहोका लागि प्रभासले लिए सय करोड !
मुम्बई । अहिले बाहुबली फेम स्टार प्रभासको चर्चा बढिरहेको छ । बाहुबलीका दुई सिरिज पछि उनको पहिलो फिल्म साहो रिलिजको संघारमा रहेको छ । साहोको हालै सार्वजनिक गरिएको एक्सन प्याक ट्रेलरले